यसपालिको दसैंमा नयाँ नोट नपाइने ! - समय-समाचार
यसपालिको दसैंमा नयाँ नोट नपाइने !
Oct 3, 2020 दशैं, दसैंमा नयाँ नोट, नयाँ नाेट, बैक, राष्ट्र बैंक
काठमाडाैं, असाेज १७ । नेपाल राष्ट्र बैंकले यो वर्षको दसैंका लागि नयाँ नोट वितरण नगर्ने भएको छ । कोभिड १९ को बढ्दो संक्रमणका कारण जोखिमसमेत बढेकाले दसैंमा नयाँ नोट वितरण नगर्ने योजना बनाएको राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकमै डेपुटी गभर्नरसहित विभिन्‍न विभागका कर्मचारीलाई कोरोना संक्रमण भएको छ । त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि कोरोना जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सीमित कर्मचारीबाट मात्रै सेवा दिइरहेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा नयाँ नोट वितरण गर्दा भिड हुने र त्यसले कोरोना संक्रमणको जोखिम बढाउने भएकाले नयाँ नोट वितरण नगर्ने निर्णयमा पुगेको ती अधिकारीले बाह्रखरीलाई बताए ।
“हामी अहिले पनि छलफलकै क्रममा छौं तर पनि यो वर्ष नयाँ नोट वितरण नगर्ने योजनामा छौं,” ती अधिकारीले भने, “कोभिडको उच्च जोखिमले गर्दा भिड गर्ने अवस्था छैन । त्यसैंले नयाँ नोट वितरण हुने सूचना आगामी साताभित्रै सार्वजनिक गरेर जानकारी गराउनेछौं ।” राष्ट्र बैंकसँग नयाँ नोट भने पर्याप्त रहेको पनि ती अधिकारीले बताए ।